Tiketi na Vatican Museum | Akụkọ Njem
Maria | | omenala, Rome
N’etiti Rome, obodo ebighi ebi, Vatican bu obodo pere mpe n’obodo nile nke Europe na ebe oria ojoo nke uka Katoliki. Ebe obibi ndị popu dị na obere oghere ahụ, obí eze nke ogige ndị mara mma gbara gburugburu nke enwere ike ịga na ndoputa tupu oge.
N'ime Vatican, na mgbakwunye na Vatican Museums, bụ Basilica nke Saint Peter, nke pụtara iche maka dome na Pieta site na Michelangelo. Nwekwara ike ịga na St. Peter na Square na n'èzí ebe Vatican na n'ime nkeji, Castel Sant'Angelo.
Ọzọ, anyị ga-amụtakwu banyere isi njem nleta nke Vatican City na otu esi azụta tiketi.
1 Ogige St. Peter
4 Tiketi maka Vatican
6 Oge eleta
Ogige St. Peter bụ otu n'ime ndị kacha ibu ma maa mma n'ụwa. Akụkụ ya dị ịtụnanya dịka ọ dị mita 240 n’obosara na mita 320 n’ogologo. Ọ dị n'ụkwụ Vatican na n'ihe omume kachasị mkpa erutela ihe karịrị mmadụ 300.000.
E wuru Ogige St. Peter n’agbata 1656 na 1667 site na ọrụ Bernini na nkwado nke Pope Alexander VII. A na-eme ya dika ellipse ma gbaa ogige ya gburugburu nwere ihe oyiyi 140 nke ndị nsọ Katọlik nke ndị na-eso ụzọ Bernini kere na 1657.
N’etiti square bụ obelisk na isi iyi abụọ, otu bụ Bernini (1675) na nke ọzọ bụ Maderno (1614). A wuru obelisk ahụ na Rome site na Egypt na 1586 ma guzo elu 25 mita.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, e mere Ebe de la Concorde na Paris na 1755 na-eso ihe oyiyi nke Saint Peter Square ebe ọ bụ na obelisk na isi iyi dị na nkesa yiri nke ahụ.
Abanye St. Peter's Basilica bụ otu n'ime ahụmahụ ndị a na-agaghị echefu echefu nwere ike ibi na Rome. Ọ bụ ụlọ kachasị mkpa Katọlik n'ihi na ebe a bụ Holy See ma si ebe ahụ popu na-eme emume kachasị mma.
Aha a sitere na onyeozi na onye isi mmụọ nsọ bụ Saint Peter, onye e liri ozu ya n'ime. Ewu ya malitere na 1506 wee gwụ na 1626, bụrụ onye edoro nsọ na ngwụcha nke otu afọ ahụ. Ihe osise nke Bramante ma ọ bụ Carlo Maderno gbara izu na ọrụ ahụ. Offọdụ ọrụ nkà a pụrụ ịchọta n’ime bụ Baldachin nke Bernini ma ọ bụ Pieta site n’aka Michelangelo.
Otu n’ime ihe kacha adọta ndị mmadụ n’anya bụ St. Peter’s Basilica bụ dome dị ịtụnanya nke otu narị na iri atọ na isii n’ogologo. Michelangelo malitere ya, Giacomo Della Porta gara n'ihu na ọrụ ahụ Carlo Maderno rụchara ya na 136. Nrịgo ahụ gbagoro na dome adịghị mma maka onye ọ bụla n'ihi na na ngalaba ikpeazụ enwere steepụ dị warara ma dị warara nke nwere ike ịba ụba. Otú ọ dị, ụgwọ ọrụ dị ukwuu n'ihi na site na ya ị nwere ike ịmasị St Peter Square na ịma mma ya niile, ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ doro anya, ọtụtụ n'ime Rome.
N'ime ya enwere ihe si India, Far East, Tibet, Indonesia, Africa na America. Ọzọkwa nchịkọta nke ceramik ochie, Flemish tapestries site na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ọrụ Greek na Roman na ogologo atụmatụ, wdg.
Ugbu a, Vatican Museums na-enweta ihe karịrị nde ndị ọbịa isii kwa afọ na otu n'ime ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ Sistine Chapel, nke a maara maka ọmarịcha mma ya na maka ịbụ ụlọ nsọ ebe a na-ahọrọ ndị popu. A rụrụ ya n'oge iwu nke Pope Sixtus nke Anọ, onye aha ya sitere na ya. Offọdụ ndị nka dị mkpa nke rụrụ ọrụ na ya bụ Miguel Ángel, Botticelli, Perugino ma ọ bụ Luca.
Tiketi maka Vatican
The Vatican Museum na Sistine banye n'plọ Ekpere bụ ndị njem nleta mma na Europe na ndị fọdụrụ n'ezinụlọ n'ọnụ ụzọ kwụ n'ahịrị. N’ụbọchị na-ekwo ekwo, ị nwere ike ichere ruo awa anọ n’ahịrị n’ọfịs tiketi. Ọ bụ ya mere nhọrọ kachasị mma bụ idobe tiketi n'ịntanetị site na weebụsaịtị Vatican Museums, nke a họpụtara ma rụọ ọrụ maka ụbọchị na oge ụfọdụ. Bọchị na oge nleta ahụ nwere ike gbanwee mgbe ọ bụla enwere nnweta.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme nleta ahụ n’onwe gị, oge kachasị mma iji mee ya bụ elekere 13:XNUMX nke ehihie. ụbọchị izu. Na ngwụsị izu, ụbọchị Sọnde ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla (nnabata n'efu) na izu ụka dị nsọ anaghị atụ aro ka ị gaa Vatican ebe ọ bụ mgbe enwere ọtụtụ mmadụ, ọkachasị n'oge dị elu.
Nkwenye izugbe abanyela n'ịntanetị iji zere kwụ n'ahịrị mbata nwere ọnụahịa nke euro 21. Na-enweghị ntinye akwụkwọ n'ịntanetị ọ na-efu euro 17 na ọnụahịa tiketi belata bụ euro 8 (na-enweghị ntinye akwụkwọ n'ịntanetị) na euro 12 iji zere ndị kwụ n'ahịrị.
Oge mmeghe nke Vatican Museums bụ elekere itoolu nke ụtụtụ. na 9pm. ọ bụ ezie na ire tiketi na-akwụsị na 18: 16 pm, awa abụọ tupu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » Tiketi na Vatican Museum